ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | MyJobs
MyJobs.com.mmဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၂၀၁၂ ခုနစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ အလုပ်အကိုင်များစွာကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး အွန်လိုင်းကနေအချိန်ကုန်သက်သာစွာဖြင့် ရှာဖွေ လျှောက်ထားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်သည်။ ရာပေါင်းများစွာသော ကုမ္ပဏီများနှင့် NGOs အဖွဲ့အစည်းများသည် MyJobs မှတဆင့် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ထမ်းများစွာကိုရရှိခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရေရှည်မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနေကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အကြံပေးခြင်းနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့လျက်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
MyJobs.com.mm သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ Ringier AG ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ Ringier Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Information Matrix Co.,Ltd နှင့်ပူးပေါင်းပြီး နာမည်ကြီး Mediaတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Duwun Mediaကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Ringier AGကို ဆွဒ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Zurich မြို့တွင် 1833 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ ၁၈ နိုင်ငံ တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆,၉၀၀ ကျော်ဖြင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းကို ကမ္ဘာ့အနှံ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။
MyJobs တွင် ဝန်ထမ်း စုဆောင်း ခန့်ထားရေးတွင် ကျွမ်းကျင်သောပြည်တွင်း ပြည်ပ အတတ် ပညာရှင် ဝန်ထမ်း ၅၀ ကျော်ဖြင့် တက်ကြွစွာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၄ င်းတို့သည် တူညီသော ရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေသောစိတ်အားထက်သန်မှု ၊ လုပ်ငန်းရှင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုသော စိတ်ထားဖြင့် အောင်မြင်မှုထပ်တူရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဈေးကွက်နှင့်ဆိုင်သောဗဟုသုတများစွာရှိသော အကောင့် မန်နေဂျာများမှ လုပ်ငန်းရှင်ဖောက်သည်များ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံး နှင့် အမြန်ဆုံး ဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
+95931349834
MyJobs မြန်မာ မှ အလုပ်အကိုင်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသလား?
MyJobs မြန်မာ အနေဖြင့် အလုပ်လျှောက်ခြင်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားခြင်းကို တိုက်ရိုက်မလုပ်ဘဲ အလုပ်ရှာဖွေသူများ နှင့် အလုပ်ခန့်ထားလိုသော လုပ်ငန်းရှင်များကြားတွင် ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ MyJobs ၏ ဖောက်သည်များ ၊ ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသူများကို ဝက်ဆိုက်ဒ် တွင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
ရိုးရိုး ပရိုဖိုင်း နှင့် ပလပ်စ် ပရိုဖိုင်း ဘယ်လို ကွာခြားပါသလဲ ?
ပလပ်စ် ပရိုဖိုင်း အလုပ်ရှာဖွေသူသည် အလုပ်ရှင်များ နှင့် အလုပ်ခန့်ထားသော အရာရှိများဆီတွင် မိမိ စီဗီကို ပိုမိုပြပေးသော အခွင့်အရေး အပြင် အလုပ်သတိပေးချက်များ ၊ အထူး စီဗီ ဖိုင်များကို ပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
MyJobs မြန်မာ ကို စီဗီ ပို့လို့ရပါသလား?
ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဆိုက်ဒ် ရှိ အလုပ်အကိုင်များသည် အလုပ်ရှင်များမှ တိုက်ရိုက် ခေါ်ယူသော အလုပ်များဖြစ်ပြီး အလွအလွယ်တကူ အွန်လိုင်းမှ တဆင့် အလုပ်ခေါ်စာ အောက် သို့ အလုပ်အသေးစိတ် ဖော်ပြချက် ဘေးရှိ " အလုပ် လျှောက်ရန်" ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်သည်။ MyJobs မြန်မာ ကို စီဗီ ပို့ ခြင်းဖြင့် အလုပ်လျှောက်ထားမှု ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ ။
ဝန်ဆောင်မှု အတွက် အခကြေးငွေ ပေးဖို့ လိုပါသလား ?
အလုပ်လျှောက်ထားမှု များအတွက် အခမဲ့ဲဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်တွေ ရှာဖို့ အခုပဲ မိမိ အကောင့် ကို ဖွင့်ပြီး အလုပ်တွေ ရှာဖွေလိုက်ပါ။ အလုပ် ရှာဖို့ အကောင့်ဖွင့်ရန် နှိပ်ပါ : https://www.myjobs.com.mm/my/phok-tel/matpone-tinyan
ဝက်ဆိုက်ဒ် မှာ အလုပ် ဘယ်လို လျှောက်ရမလဲ ?
ရှာဖွေလိုသော အလုပ်အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ၎င်းအောက်ရှိ အလုပ်များကို ရွေးချယ်လျှောက်လို့ရပါသည် ။ အလုပ်လျှောက်ရတွင် သိလိုသည်များရှိပါက Candidate Service ဌာန သို့ဆက်သွယ် ပြီး အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသည် ။
စီဗီကို ဘယ်လို တင်ရမလဲ ?
စီဗီမတင်မီ ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အကောင့်အရင် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အကောင့်မရှိသေးပါက အရင်ဆုံး အကောင့် ဝင်လုပ်ပါ။ အကောင့်ပြုလုပ်ပြီးပါက ဝင်ပြိး "စီဗီတင်ရန်" ကို နှိပ်ပြီး မိမိ စီဗီကို အလွယ်တကူ တင်လို့ရပါသည်။ အလုပ်လျှောက်တိုင်း စီဗီ ပါ မပါ စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ဝက်ဆိုက်ဒ်မှ တဆင့် အွန်လိုင်းက အလုပ်လျှောက်လိုက်ရင် ဘယ်လို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသလဲ ?
ဝက်ဆိုက်ဒ်မှ တဆင့် အွန်လိုင်း က အလုပ်လျှောက်လိုက်ရင် အလုပ်လျှောက်လွှာက အလုပ်ရှင်ဆီကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားပါသည်။ အလုပ်ရှင်မှ ချက်ချင်း အကြောင်းမပြန်ရင် စိတ်မပူပါနဲ့ ။ အလုပ်လျှောက်လွှာများ စီစစ်ရွေးချယ်မှု က ရက်သတ္တပတ် ကနေ လပေါင်းများ စွာ ကြာတတ်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်က ပြန်အကြောင်းကြားလာရင် သင်၏ အလုပ်လျှောက်ထားမှု က ပြီးမြောက် အောင်မြင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ အနေဖြင့်လည်း အလုပ်ရှင်များကို အလုပ်လျှောက်ထားမှုများကို ရွေးချယ်သည် ဖြစ်စေ မရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ အကြောင်းပြန်ဖို့ တိုက်တွန်း ပညာပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အလုပ်လျှောက်တဲ့ မိမိ အကောင့်ကို ဖွင့်မရလျှင် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲ ?
အကောင့်သို့ဝင်ရန် စာမျက်နှာ Login Page တွင် မိမိ အကောင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ပြန်လည် ပြုလုပ်လို့ရပါသည်။ ဒါမှ မဟုတ် မိမိ အကောင့်နာမည်ရော အကောင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ရော မေ့သွားပါက အောက်ပါ လင်ခ်က https://www.myjobs.com.mm/my/password/remind တဆင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ပြန်လည် ပြုလုပ်လို့ရပါသည်။
မသင်္ကာဖွယ် အလုပ်များကို ဘယ်လို သတင်းပို့လို့ပါသလဲ ?
အလုပ်ခေါ်တိုင်းတွင် 'သတင်းပို့ရန်' နေရာပါရှိပါသည်။ သတင်းပေးပို့လိုပါက နှိပ်ပြီး ဘာကြောင့် သတင်းပို့ရတဲ့ အချက်ကို ဖြည့်စွက်ပြီး သတင်းပို့နိုင်ပါတယ်။ သတင်းပို့ချက်ရရှိတာနှင့် တပြိုင်တည်း စီစစ်ပြီး ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်အမှတ် နံပတ် Job ID ကို မှတ်သားပြီး MyJobs.com.mmm ၏ Facebook Page မှ ဖြစ်စေ ၊ Infor@MyJobs.com.mm မှ ဖြစ်စေ သို့ ဖုန်း +၉၅ ၉ ၃၁၃၄၉၈၃၄ သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် သတင်းပေးပို့ မေးမြန်နိုင်ပါသည်။
မှားယွင်းသော၊ မလုံခြုံသည့် အလုပ်ရှာဖွေမှုလှုပ်ဆောင်မှုများမှ သင့်ကိုသင်ကာကွယ်ပါ။
မှားယွင်းသည့်၊ မလုံခြုံသည့်လှုပ်ဆောင်မှုများသည် အောက်ဖော်ပြပါပုံစံများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် -
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းသည့် ကြော်ငြာများသည်အွန်လိုင်းအလုပ်စာမျက်နှာများတွင်မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။
ကြော်ငြာရှင်များသို့မဟုတ် MyJobs Myanmar အဖြစ် ဟန်ဆောင်ကာ အချက်အလက်တောင်းခံသည့်အီးမေးများကို တစ်စုံတစ်ဦးကပေးပို့လာနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို ပီရှင်း (ဖီရှင်းဟုဖတ်သည်) ဟုခေါ်သည်။
အလုပ်ခန့်ထားခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ကို တစ်စုံတစ်ဦးအားငွေပေးချေရခြင်း။
အီးမေး (ပီရှင်း) လိမ်လည်မှု-
ပေးပို့သူလိပ်စာ - 'မှ' လိပ်စာများသည် အမြဲလိုလို တရားဝင်သကဲ့သို့ပြုလုပ်ခံရလေ့ရှိပါသည် ထို့ကြောင့် 'မှ'လိပ်စာကိုသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နှုတ်ဆက်ခြင်း - MyJobs Myanmar အီးမေးများသည် သင့်အမည်အပြည့်အစုံနှင့်အမြဲပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ 'မင်္ဂလာပါ အလုပ်လျှောက်ထားသူ' သို့မဟုတ် 'မင်္ဂလာပါအလုပ်ရှင်' စသည်ဖြင့်ပေးပို့လာသည့်နှုတ်ဆက်အီးမေးများကို သတိပြုပါ။
အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ပုံစံဖြင့်လိမ်လည်ခြင်း - ပီရှင်းအီးမေးများသည် ၎င်းတို့အချက်အလက်လိမ်လည်ရယူနိုင်ရန် အသုံးပြုသူက အလျှင်အမြန်ဆောင်ရွက်စေရန်လှုံ့ဆော်ရေးသားလေ့ရှိသည်။
ညံ့ဖျင်းသည့်စာလုံးပေါင်း/သဒ္ဒါ - ပီရှင်းအီးမေးများသည် အမြဲလိုပင် သဒ္ဒါအရေးအသား မှန်လေ့မရှိပါ။ ညံ့ဖျင်းသည့်စာလုံးပေါင်းနှင့် သဒါအသုံးနှုန်းများတွေ့လျှင်သတိချပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ MyJobs Myanmar မှပေးပို့သည့်အီးမေးမဟုတ်ကြောင်းသိရှိနိုင်မည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
လင့်အတုများ - အီးမေးတွင်ပေးပို့လာသည့် လင့်များကိုနှိပ်သည့်အခါတွင်သတိချပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပီရှင်း အီးမေးတို့တွင် လင့်၏မူလဇစ်မြစ်ကိုဖျောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ မနှိပ်မှီ လင့်တွင်ပွိုင်တာထောက်၍ နှိပ်လျှင်မည်သည့်လိပ်စာသို့ရောက်မည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ ယူအာအဲလ်(URL) မှထူးခြားသည့်အချက်ကိုကြည်ပါ ထို့နောက်သင်မသေချာလျှင် ထိုလင့်ကိုမနှိပ်မိပါစေနှင့်။
အမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့ အလွန်ကောင်းမွန်အောင်ဖော်ပြထားသည့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများက အမှန်မှာ - အောက်ဖော်ပြပါတို့အားတောင်းဆိုသည့် ကြော်ငြာရှင်များကိုသတိပြုပါ -
ဖောင်တင်ရန် ပမာဏဝန်ဆောင်ခ (ဥပမာ - သင့်အလုပ်လျှောက်ထားမှုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း)
'ငွေပေးချေမှု' အပိုင်းဟုသင်မှတ်ယူနိုင်သည့် ငွေကြေးလွဲပြောင်းမှုလက်ခံခြင်း။ 'ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း'၊ 'ဗီဇာလုပ်ဆောင်ခြင်း'၊ 'လျှောက်မှုလုပ်ဆောင်ရန်'၊ 'ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်' သို့မဟုတ် အခြားအမျိုးများသောနည်းလမ်းဖြင့်တောင်းခံသည့်အခကြေးငွေ။
ဘဏ် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် ပါတ်စပို့အချက်အလက်။
အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ အသွင်ပြင်၊ အိမ်ထောင်ရှိမရှိစသည်အချက်များ။
MyJobs Myanmar , LinkedIn, Facebook သို့မဟုတ်အခြား အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်။
မည်သည့်အခြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာအတည်ပြုနိုင်မည့်အချက်အလက်များ။
MyJobs Myanmar က ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဆိုဒ်တွင်ရှိသည့် အလုပ်အားလုံးသည် အမှန်တကယ်လစ်လပ်နေသည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်စေရန်နှင့် ဝက်ဆိုဒ်၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အခြေအနေများကို ချိုးဖောက်နိုင်သည့် ကြော်ငြာများကို ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းမပြုလုပ်မှီတွင် မည်သည့် ကြော်ငြာ၊ အီးမေး သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်မဆို သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိမရှိနှင့် မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အဖွဲ့စည်းခပ်ကြီးကြီးနှင့် လူသိများသည့် ကုမ္ပဏီများသည် Hotmail သို့မဟုတ် အခြား အခမဲ့အီးမေးလိပ်စာများကို ၎င်းတို့ကြော်ငြာလိပ်စာများအဖြစ်အသုံးပြုလေ့မရှိပါ။ သင့်တွင်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက ကုမ္ပဏီအားဆက်သွယ်၍ ကြော်ငြာကိုအတည်ပြုပါ၊ ကြော်ငြာတစ်ခုက ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်ဖြစ်ကြောင်းအလွယ်တကူမှတ်ယူခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
MyJobs Myanmar မှ အလုပ်ကြော်ငြာ၊ အီးမေးသို့မဟုတ် အလုပ်ရှာသူအလုပ်ရာဇဝင် တို့၏မှန်ကန်မှုရှိမရှိနှင့် ဆက်ဆိုင်၍
ကျွန်ုပ်တို့ထံချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပါ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာတိုင်းတွင်ပါဝင်သည် "ယခုကြော်ငြာကိုတိုင်ကြားပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်၍အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် https://www.facebook.com/MyJobsMyanmar မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားပါ
သင့်ကွန်ပြူတာတွင် နောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်တင်ထားသည့် ဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ရေးဆောဖ်ဝဲထည့်သွင်းထားပါ။
အကယ်၍ သင့်ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်နှင့် ဘဏ်ကဒ်အချက်အလက်များကို ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်လျှင် သင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းကို မဆိုင်းမတွ ဆက်သွယ်၍ အကြံဉာဏ်တောင်းခံပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမေးမြန်းသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အီးမေးများကို အမြဲသတိချပ်ပါ။
MyJobs မှ လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်နေသော အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများ ရရှိအောင် ဝန်ဆောင်မှုများ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သင့် အချက်အလက်များကို ဖောင်တွင် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်လိုက်ပါက MyJobs ၏ အကောင့်မန်နေဂျာမှ သင့် ဆီ အချိန်တို အတွင်း ဆက်သွယ်လာပါမည်။
ရန်ကုန်ရုံး : ပထမထပ်၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို အီး ၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း ၀၉ ၃၁၃ ၄၉၈၃၄
မန္တလေးရုံး : အခန်း ဂျီ ၄ ၊ မြေညီထပ် ၊ ရတနာတိုင်းပြည် အိမ်ယာ၊ ၃၂ လမ်း ၊ လမ်း ၆၀ နှင့် ၆၂ လမ်း ကြား ၊
မန္တလေး မြို့ ဖုန်း ၀၉ ၃၃၈ ၅၁၀၇၀
နိုင်ငံကုဒ်နံပါတ် ရွေးချယ်Myanmar (+95)Afghanistan (+93)Albania (+355)Algeria (+213)American Samoa (+1)Andorra (+376)Angola (+244)Anguilla (+1)Antarctica (+0)Antigua and Barbuda (+1)Argentina (+54)Armenia (+374)Aruba (+297)Australia (+61)Austria (+43)Azerbaijan (+994)Bahamas (+1)Bahrain (+973)Bangladesh (+880)Barbados (+1)Belarus (+375)Belgium (+32)Belize (+501)Benin (+229)Bermuda (+1)Bhutan (+975)Bolivia (+591)Bosnia and Herzegovina (+387)Botswana (+267)Bouvet Island (+0)Brazil (+55)British Indian Ocean Territory (+246)Brunei Darussalam (+673)Bulgaria (+359)Burkina Faso (+226)Burundi (+257)Cambodia (+855)Cameroon (+237)Canada (+1)Cape Verde (+238)Caribbean Netherlands (+599)Cayman Islands (+1)Central African Republic (+236)Chad (+235)Chile (+56)China (+86)Christmas Island (+61)Cocos (Keeling) Islands (+61)Colombia (+57)Comoros (+269)Congo (+242)Congo, Democratic Republic of (+243)Cook Islands (+682)Costa Rica (+506)Croatia (+385)Cuba (+53)Curaçao (+599)Cyprus (+357)Czech Republic (+420)Côte d'Ivoire (+225)Denmark (+45)Djibouti (+253)Dominica (+1)Dominican Republic (+1)Ecuador (+593)Egypt (+20)El Salvador (+503)Equatorial Guinea (+240)Eritrea (+291)Estonia (+372)Ethiopia (+251)Falkland Islands (+500)Faroe Islands (+298)Fiji (+679)Finland (+358)France (+33)French Guiana (+594)French Polynesia (+689)French Southern Territories (+0)Gabon (+241)Gambia (+220)Georgia (+995)Germany (+49)Ghana (+233)Gibraltar (+350)Greece (+30)Greenland (+299)Grenada (+1)Guadeloupe (+590)Guam (+1)Guatemala (+502)Guernsey (+44)Guinea (+224)Guinea-Bissau (+245)Guyana (+592)Haiti (+509)Heard and McDonald Islands (+0)Honduras (+504)Hong Kong (+852)Hungary (+36)Iceland (+354)India (+91)Indonesia (+62)Iran (+98)Iraq (+964)Ireland (+353)Isle of Man (+44)Israel (+972)Italy (+39)Jamaica (+1)Japan (+81)Jersey (+44)Jordan (+962)Kazakhstan (+7)Kenya (+254)Kiribati (+686)Kuwait (+965)Kyrgyzstan (+996)Lao People's Democratic Republic (+856)Latvia (+371)Lebanon (+961)Lesotho (+266)Liberia (+231)Libya (+218)Liechtenstein (+423)Lithuania (+370)Luxembourg (+352)Macau (+853)Macedonia (+389)Madagascar (+261)Malawi (+265)Malaysia (+60)Maldives (+960)Mali (+223)Malta (+356)Marshall Islands (+692)Martinique (+596)Mauritania (+222)Mauritius (+230)Mayotte (+262)Mexico (+52)Micronesia, Federated States of (+691)Moldova (+373)Monaco (+377)Mongolia (+976)Montenegro (+382)Montserrat (+1)Morocco (+212)Mozambique (+258)Namibia (+264)Nauru (+674)Nepal (+977)New Caledonia (+687)New Zealand (+64)Nicaragua (+505)Niger (+227)Nigeria (+234)Niue (+683)Norfolk Island (+672)North Korea (+850)Northern Mariana Islands (+1)Norway (+47)Oman (+968)Pakistan (+92)Palau (+680)Palestine, State of (+970)Panama (+507)Papua New Guinea (+675)Paraguay (+595)Peru (+51)Philippines (+63)Pitcairn (+0)Poland (+48)Portugal (+351)Puerto Rico (+1)Qatar (+974)Romania (+40)Russian Federation (+7)Rwanda (+250)Réunion (+262)Saint Barthélemy (+590)Saint Helena (+290)Saint Kitts and Nevis (+1)Saint Lucia (+1)Saint Vincent and the Grenadines (+1)Saint-Martin (France) (+590)Samoa (+685)San Marino (+378)Sao Tome and Principe (+239)Saudi Arabia (+966)Senegal (+221)Serbia (+381)Seychelles (+248)Sierra Leone (+232)Singapore (+65)Sint Maarten (Dutch part) (+1)Slovakia (+421)Slovenia (+386)Solomon Islands (+677)Somalia (+252)South Africa (+27)South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)South Korea (+82)South Sudan (+211)Spain (+34)Sri Lanka (+94)St. Pierre and Miquelon (+508)Sudan (+249)Suriname (+597)Svalbard and Jan Mayen Islands (+47)Swaziland (+268)Sweden (+46)Switzerland (+41)Syria (+963)Taiwan (+886)Tajikistan (+992)Tanzania (+255)Thailand (+66)The Netherlands (+31)Timor-Leste (+670)Togo (+228)Tokelau (+690)Tonga (+676)Trinidad and Tobago (+1)Tunisia (+216)Turkey (+90)Turkmenistan (+993)Turks and Caicos Islands (+1)Tuvalu (+688)Uganda (+256)Ukraine (+380)United Arab Emirates (+971)United Kingdom (+44)United States (+1)United States Minor Outlying Islands (+0)Uruguay (+598)Uzbekistan (+998)Vanuatu (+678)Vatican (+39)Venezuela (+58)Vietnam (+84)Virgin Islands (British) (+1)Virgin Islands (U.S.) (+1)Wallis and Futuna Islands (+681)Western Sahara (+212)Yemen (+967)Zambia (+260)Zimbabwe (+263)Ãland Islands (+358)
"စာပို့ရန်" ကိုနှိပ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်နှင့် အခြေအနေများ နှင့် လုံခြုံရေးမူ၀ါဒ သဘောတူညီကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပါ။